बलात्कारको आरोप लागेपछि पीडितसँगै गरे बिहे, ५ वर्षपछि अदालतले दियो ७ वर्षको जेल, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
बलात्कारको आरोप लागेपछि पीडितसँगै गरे बिहे, ५ वर्षपछि अदालतले दियो ७ वर्षको जेल
एजेन्सी। बुधबार भारतको पंजाब राज्यको मोगामा एक अदालतमा निकै अनौठो किसिमको फैसला भएको छ । घटनाअनुसार नाबालिग युवकले नाबालिग युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोप लगाइएको थियो । किशोरीका पिताले प्रहरीमा उजुरी दिएपछि किशोर गिरफ्तार भए । पछि किशोर जमानतमा छुटेपछि उनै किशोरीसँग प्रेम भयो । केही समय उनीहरुको प्रेम चल्यो त्यसपछि उनीहरुले ४ जुलाई २०१७ मा अदालतमा बिहे गरे । बिहेपछि दुवैको छोरा पनि छ । तर २०१३ मा दर्ता भएको बलात्कारको मुद्दा भने अदालतमा चलिरह्यो ।
अदालतमा मुद्दा चलिरहँदा ती युवतीले पटक पटक अदालतमा आफ्ना पतिको पक्षमा बयान दिइन् । तर उनको कुनै पनि तर्क काम लागेन । बुधबार ५ वर्ष पुरानो मुद्दामा एडिशनल शेसन जजले नाबालिग किशोरीलाई बिहेको प्रलोभन देखाएर भगाएको र बलात्कार गरेको अभियोगमा युवकलाई दोषी ठहर गर्दै ७ वर्ष जेल र ५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाए । युवककी आमाविरुद्ध पनि अभियोग लगाइएकोमा आमालाई भने अदालतले निर्दोष ठहर गरेको छ ।
मोगाका पलविंदर सिंह र उनकी आमा जसविंदर कौरमाथि २०१३ मा गाउँका जमिन्दारकी १७ वर्षकी छोरीलाई प्रलोभनमा पारेर भगाएको आरोप लगाइएको थियो । प्रहरीले दुवैलाई खोजेर युवकलाई पक्राउ गर्यो । त्यसपछि किशोरीको मेडकल जाँच गराइयो र बलात्कारको समेत मुद्दा दर्ता गरियो । पलविंदरलाई अदालतले जेल पठायो । २४ अगष्ट २०१५ मा पलविंदर जेलबाट जमानतमा रिहा भए ।
पलविंदर रिहा भएर घर फर्किएपछि पुनः उनै युवतीसँग प्रेम भयो । यसपछि दुवैले ४ जुलाई २०१७ मा मोगाको जिल्ला एवमु शेसन जजको अदालतमा बिहे गरे । तर अदालतमा पुरानो बलात्कारको मुद्दा भने चलिरहेको थियो किनकि यो मुद्दा किशोरीका पिताले हालेका थिए । जुन समय मुद्दा दर्ता गरिएको थियो त्यतिबेला किशोर र किशोरी दुवैको उमेर १७ वर्ष थियो । त्यसैले आफू नाबालिक हुँदाको मुद्दा किशोरीले फिर्ता लिन मिल्दैनथ्यो । यद्यपि उनले आफ्ना पतिलाई बचाउने हरसम्भव प्रयास गरिन् तर अदालतले युवकलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनायो । युवककी आमा जसविंदरलाई भने अदालतले निर्दोष ठहर गरेको छ ।